विवेकशील आसुतोष : कर्मठ बानी, त्यस्तै सोच - Dainik Nepal
विवेकशील आसुतोष : कर्मठ बानी, त्यस्तै सोच
दैनिक नेपाल २०७६ कार्तिक २० गते १४:५४
काठमाडौं, २० कात्तिक । नगरे केही हुन्न, गरे जे पनि हुन्छ भन्ने भनाईका मानक हुन् आसुतोष प्रधान । भर्खर २९ को उमेरयोगमा हिँडिरहेका छन् तर देश बदल्न सक्ने विचारका साधक जस्ता छन् ।
पारदर्शी चश्मा लगाउँछन्, विचार पनि त्यस्तै छ । व्यावसाय गर्छन् राजनीतिमा पनि सक्रिय भेटिन्छन् । समाज बदल्नुपर्छ भन्ने मौलिक विचारसँगै, मौलिक व्यावसाय (कृषि र पर्यटन)मा हात हालेका छन् ।
एसएलसीसम्म चितवनमा अध्ययन गरे, उच्च अध्ययन काठमाडौंमा सुरु गरे । तर मूल छाड्न मन लागेन त्यसैले तनहुँमा लाग्ने घामको किरण समात्नकै लागि बन्दीपुर हानिए ।
काठमाडौंमा रहँदा पर्यटन व्यावासायका क्षेत्रमा कर्मचारीका रुपमा काम गरेकैले उनलाई बन्दीपुरमा टिक्न खासै कठिन भएन । शिक्षा संकायमा अंग्रेजी विषयमा अध्ययन गरेका प्रधान यसै पनि बन्दीपुरका लोकल गाइड (पर्यटक घुमाउने व्यक्ति) जस्ता थिए ।
भन्छन्,‘यसै पनि लोकल ‘गाइड’जस्तो थिएँ । त्यहाँ पुगेका पर्यटकलाई घुमाउने, बुझाउने र त्यस ठाउँका विषयमा जानकारी गराउने काम गर्न थालें । अझ, यसमा काठमाडौंमा पर्यटन व्यावासयको बजार हेर्ने कामले मलाई अझ मद्दत मिल्यो ।’
बन्दीपुरमा अर्गानिक हाउस छ उनको । सानोबाट सुरु गरे । असामान्य बनिसकेको छ । नाम जस्तो छ सेवा पनि उस्तै, अर्गानिक अर्थात् मौलिक । राजनीतिक विचार पनि उनको मौलिक छ । त्यसैले सदस्यता लिएको केही महिनामा नै भएको महासम्मेलनमा विवेकशील नेपाली दलको सर्वाधिक मत मध्ये २ नम्बरमा परेर केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए, हालै ।
आफू आत्मनिर्भर भए राजनीति सहज हिसाबले गर्न सकिन्छ भन्ने उनको सोच छ । यति मात्र होइन, आत्मनिर्भर राजनीतिले विकल्पको लहर फैलाउन सक्ने सम्भावनालाई न्युनतममा होइन, अधिकतममा राख्छन् प्रधान । भन्छन्,‘त्यसैले हामीले कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ देश बनाउनका निम्ति कुन कुन विधामा कस्ता काम हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट खाका देखाएका पनि छौं ।’
राजनीति एकातिर भए पनि उनको चासोको विषय पर्यटन व्यावसाय हो, अधिकतम् । आफैं पनि होमस्टे लगायतका विविध परियोजनामा काम गरिरहेका प्रधानले सरकारद्वारा घोषणा भएको भिजिट नेपाल ट्वान्टी ट्वान्टीलाई नजिकबाट नियाँलेका छन् ।
आफूलाई देखेर झन् भागेको एउटा सानो उदाहरण तेर्साउँदै प्रधान सुनाउँछन्,‘किन भाग्नु भएको भनेर सोधें, उनको उत्तर थियो– मेरा दुईवटा छोरा विदेशमा छन् कुनै अशुभ खबर आयो कि भनेर डराएकी ।’
पर्यटन क्षेत्रमा अधिकतम ज्ञान र सीप सँगालेका प्रधानलाई यो कार्यक्रमको तयारी र विविध समिति गठन भएको देख्दा दाँतमा ढुंगा लागे जस्तो भएको छ । भन्छन्,‘पार्टीको कार्यकर्ता भएमात्र भिजिट नेपालको आयोजक समितिमा बस्ने योग्यता हुने, ज्ञान हुन नपर्ने रहेछ । यसरी नेपालमा २० लाख पर्यटक आउन सक्छन् ?’
यसै सन्दर्भमा गज्जबको धारणा अघि सार्दै प्रधान प्रश्न गर्छन्, ‘हिमाल त्यहि हो, पहाड त्यहि हो, पोखरा, चितवन, बन्दीपुर यीनै हुन् । तर हामीले पर्यटकलाई नयाँ के दिने ? भिजिट नेपाल कसरी सफल बनाउने भन्ने स्पष्ट आधार खोई ?’
चार घन्टामा पुगिने बन्दीपुरलगायतका ठाउँमा यातायातको सरल सुविधाका लागि पर्यटकका निम्ति ११ घन्टाको जाममा उभ्याउने ? उसले कस्तो म्यासेज लिएर जाला ? यस्ता प्रश्न गर्न चहान्छन् सरकारसँग, उनी । प्रधान भन्छन्,‘धेरै भन्दा धेरै पर्यटक भित्राउनका निम्ति हाम्रो तयारी बलियो र अझ धेरै पर्यटक आउने हुनुपर्छ ।’
नेपाली समाजको चित्र र राजनीतिको विचित्र देखेर त्यसलाई सच्याउने, लयमा ल्याउने सोच पनि छ उनमा । अर्गानिक मास र मस्याम खरिद गर्न बन्दीपुरभन्दा केही परको गाउँमा पुग्दा एक महिला आफूलाई देखेर झन् भागेको एउटा सानो उदाहरण तेर्साउँदै प्रधान सुनाउँछन्,‘किन भाग्नु भएको भनेर सोधें, उनको उत्तर थियो– मेरा दुईवटा छोरा विदेशमा छन् कुनै अशुभ खबर आयो कि भनेर डराएकी ।’
समाजको यो चित्रसँग पनि प्रधान अलिक रुष्ट छन् । नेपालमा आफूले केही नगरी विदेशमा जाने युवाका लागि उदाहरण नै बनेका उनी भन्छन्,‘आफ्नो माटोमा काम गरे, परिश्रम गरे पो मुलुक बन्न सक्छ । बनाउन सकिन्छ । समाज अहिले यस्तै देखिन्छ । गाउँमा युवा छैनन् । बारी जर्जर छन् । अनि कसरी बन्छ देश ?’
यी प्रश्नहरूमा उनी घोत्लिनै पर्ने परिघटना उनकै जीवनमा पनि छन् । २९ जना एसएलसीमा पास गरेका प्राय सबै युरोप अमेरिका वा कुनै न कुनै देशमा छन् । साधारण काम गरिरहेका छन् । उनलाई पनि कतिपयले सोध्छन्,‘विदेश किन नगएको ?’ देश बनाउनुपर्छ भन्ने विकल्पको राजनीतिमा अभ्यस्त प्रधान भन्छन्,‘त्यहाँ साधारण काम गर्न जाँदा मात्र विदेश गएको देख्छ समाज, म घुम्न गएको देख्दैन । यो सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।’
आफ्ना कलिगहरू नै मुलुक छाडेर विदेश पलायन भएको दिक्दारी देखेका कारण आफूलाई परदेशमा गई रोजगारी गर्ने सोच कहिले पनि नआएको उनी बताउँछन् । ‘देश हामीले बनाउने हो, हाम्रो पुस्ता नै पलायन भएपछि कसले बनाउँछ’, उनी भन्छन्,‘राजनीति त्यो पनि सुसंस्कृत र इमानको हाम्रै पुस्ताले नै गर्ने हो ।’
विवेकशील नेपाली दलमा आफ्नो आवद्धता उनी विचारको मात्र नभएर व्यवाहारको राजनीतिक दर्शनलाई पनि लिन्छन् । परम्परागत राजनीतिक विचारले हरेक क्षेत्रमा जकडेको यथार्थ पनि थाहा छ । तर, उनलाई विश्वास छ परिवर्तन सम्भव छ । त्यसैले भन्छन्,‘हिलोभित्र फुल्ने कमल बन्नु छ, जसले हिलोलाई छेकेर सुन्दरता प्रदान गर्न सक्छ । त्यसैका लागि राजनीति पनि गरेको हुँ ।’